Shariifow ama Mudulood ahoow ama Muslim ahoow. (Sheekh Shariif shalay iyo maanta)
Kadib markii qilaaf sababay in laba garab ay kala noqdaan isbahaysigii dib u xoreynta Soomaaliya uu soo shaacbaxay kaasoo ay ka dhalatay markii saxiix xabad joojin ah ay qalinka ku duugeen hogaankii sare ee isbahaysiga.
Saxiiixaas ayaa ahaa mid aysan ka warqabin sida ay sheegeen garabka isbahaysiga ee Asmara taasoo iyana ku qasabtay in ay hogaan doortaan kalsoonidiina kala laabtaan garabka Jabuuti ee uu horboodayay Ex- gudoomiyihii gollaha fulinta ee Maxaakiimta islaamiga, Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Kaliya maaheen garabka Asmara raga ka biyo diiday heshiiskaas qar iska tuurka ahaa ee waxaa sidoo kale jiray in dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshadda ay saluugsanaayeen qaabka uu heshiiska u dhacay iyo sida ay suuragal u tahay in iyadoo ciidamadda cadowga Itoobiya oo ku sugan guddaha Soomaaliya loo aqbalo xabad joojin.
Waxaa soo ifbaxday durbadiiba in garabka Shariifka ay soo buuxiyaan rag badan oo iyagu kolkii hore loo heystay in ay qaab wadaniyad ama dhiigu soo kiciyay oo qurbajoog, siyaasiyiin iyo culumo isugu jiray, sidoo kale qaar ka soo go'ay baarlamaanka dowladda federaalka oo uu hogaaminayay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ay iyana ku dul hagoogteen Shariifka taasoo u muuqatay xaqiraad dadkii soo halgamay iyo waliba ku gor gortamid dhiiga mujaahidiinta.
Waxaa inta badan dad aan anigu ka mid ahay aamusiyay waxay eheed iyadoo laga war dhowrayay bal qaabka iyo dhaqanka cusub ee Shariifka in la ogaado iyo waliba in la dhowro waxa ka hirgala heshiiskaas uu aqbalay, waxaana intaa sii dheereed in la ogaado bal waxa ku qasbay in uu banaanka ka istaago asxaabtiisii ay halganka guusha iyo samirka ku dhisnaa soo wada qaateen.
Waxaa uu lahaa runtii magac qurxoon bulshadda dhexdeeda mustaqbalkiisana waxa uu gaarsiisnaa in shacabka qaarkii ay uurka ka lahaayeen mar hadii shariifka madaxweyne loo dooran lahaa waxaa soo daahiri lahaa xaqa, taasoo ka timid fir fircoonidiisii, hadalkar-nimadiisii hore markii uu ahaa amiirka Maxaakiimta islaamiga.
Shariifka waxaa uu magaciisa noqday mid wada gaaray goboladda dalka Soomaaliya gaar ahaan iyo waliba guud ahaan caalamka oo loo aqoonsaday in uu yahay geesi ka soo ifbaxay geeska afrika, waxaana xiligaas uu ahaa ninkii iclaamiyay ama ku baaqay jihaadka ka dhanka ah ciidamadda xabashidda ee soo duulay kadib markii ay gudaha u soo galeen goboladda Dalka Soomaaliya.
Waxaa waagaa socotay waan waan u dhaxaysay maxaakiimta islaamka iyo dowladda federaalka traasoo ay marti galisay dowladda Suudaan, waagaas oo aanan dhimasho dhicin, barac jirin, xasuuq aanan la filanayn bey ku habooneed dib u heshiisiinta Shariifka maanta oo xeero iyo fandhaal kala dhaceen sidee buu shariifka ugu qancin karaa dadkii taageersanaa in uu heshiis xabad joojin ah saxiixay.
Hadaan u soo daa dago dulucda maqaalkeyga ee ah SHARIIFOW AMA MUDULOOD AHOOW MA MUSLIN AHOOW ayaan waxaan ula jeedaa in Shariifkii lahaa magaca iyo maamuuska ahaana nin u siman dhamaan Soomaalida oo dhan, iyadoo uu hadda u muuqdo in uu yahay mid sii weynayo magacii uu lahaa, Sheekh Shariif waa magacii loogu yeeri jiray waagii Maxaakiimta hadase waxaa uu yahay mid ku dhow in la siiyo magaca siyaasi, oday dhaqameed, gudoomiye qabiil, qab qable I.W.M.
Waxaa uu Afur Sharaf ugu sameeyay mid kamida hoteeladda ugu caansan magaaladda Nairobi qabaa'illo Soomaaliya haba ugu badnaadeen beesha uu ka soo jeedo ee Muduloode, waxaase uu wadaa olole cad uu cida walba u muuqata kaasoo uu ku kasbanayo raga ugu dhow dhow ee beeshiisa isagoo u muuqda in uu faraha la sii galayo arimo siyaasad iyo kuwo qabiil oo qalafsan.
Waxaa haatan garbihiisa taagan taariikh ahaan rag u qoran lana wada ogyahay halka ay uga jiraan qadiyadda umadda Soomaaliyeed, waxaana dhamaan go'ay xiriirkii uu la lahaa culimadda, aqoonyahanadda iyo mujaahidiinta, ka dagaalamaysay guddaha, Sidoo kale waxaa uu isku dayay in maleeshiyo ka amar qaadata uu ku abuurto guddaha iyadoo la ogyahay in magaaladda JOWHAR uu isku dayay in uu la wareego inkastuu ku fashilmay hadana wali wuu hayaa wadadii kamanna uusan joogsan.
Waxa uu canbaareyn u soo jeediyay weeraradda ka dhanka ah cadowga ee Mujaahidiintu waddaan, waxa uu sidoo kale canbaareeyay qabshadii ay mujaahidiintu qabsadeen Kismaayo isagoo u muuqada in uu iska fogeynayo doonayana in uu iska dhaqo sida ay ula muuqato argagixisnimo, 'Xag jiriin iyo dhex dhexaad ama qunyar socod' waa shabaqii lagu dabay shariifka ee hadda dhigay xaaradda salkeeda.
Shariifka shalay iyo maanta, Shalay waxa uu ahaa hogaamiye leh taageerayaal maanta waxa uu u soo dhurtay ama u muuqdaa qab qable haddii aysan wax iska badalin, balse talaabooyinkiisa cad cad ayaa ka tarjumaya waxa uu tiigsanayo Shariifka.
AMA MUDULOOD AHOOW AMA MUSLIN.... Cinwaanka aan qaatay ee sidaa ah ulama jeedo mana ahan mid Mudulood ka saaraya muslimiinta inta kale ee waxaan ula jeedaa mid tusaaleyn ah runtiina wey kala duwan tahay in qaab qabiil loo shaqeeyo iyo waliba in qaab Muslin-nimo loo shaqeeyo, taasoo ka dhigaysa in aan oran karno Shariifow ama Mudullood u shaqee ama Muslin u shaqee, sidaana uu cinwaanka noqonayo iyadoo aad wada ogtihiin in qaab qabiil u shaqeyntiis ama qaab qab qable in loo shaqeeyo ay ka duwan tahay kana fogtahay diinta.
Hadii ay maskaxdiisa ku jirto in uu u shaqeeyo qaab mudulood-nimo waxay noqonaysaa in uu sidiisii ugu laabto oo uu Maxamed Dheere Safka la soo galo isla markaana la soo dhaweeyo oo laga dhaqo magacii ahaa SHARIIF LA SOO GAMAY. oo loogu yeeri jiray xiligii amiirka abaabulka iyo dagaalka looga dhigay maxaakiimta, dadka magacaas uu bixiyay ayaa ahaa dadka uu ka dhashay ee uu isagu ka soo jeedo, iyagoo ula jeeday in Jowhar markii uu Maxamed dheere la joogay laga soo gamay ama laga soo eryay hadii si kale loo fasiro.
Maanta wali waxaa ku sugaya dhagaha shacabka Soomaaliyeed, waxaadna tahay mid quus laga joogo oo ku raaxeysanaya Hoteeladda waaweyn ee Nairobi iyo Jabuuti halka asxaabtaadii qaar kamid ahna ay guddaha ka wadaan iska caabin iyo dagaalo jihaad ah tusaale ahaan Shahiid Sh. Cabdullaahi ASBARO oo magac iyo maalba illaah siiyay balse ka doortay in uu dariiq illaah raali ka yahay ku baxo allaha ka aqbalo niyadiisee.
Shariif maanta hadaad xildoon tahay, hadaad maal doon tahay iyo hadii qadiyad kale iyo wax aanan ogeyn ku waalayaan waqtigu wuu yar yahay saaxiibaduna maaha in aad maqaayad kula shaah cabtaa jawaasiista safaaradda Mareykanka iyo waliba qaramadda midoobay la shaqeeya ee Nairobi ku sugan, iyadoo uu dhiiga shacabka wali qubanayo.
Warsame Cali Axmed